Gmail Design အသစ်က ဘာလို့ လူတိုင်းအသုံးပြုသင့်တာလဲ?
30 Apr 2018 . 11:43 AM
Google ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်က Web Browser Version မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Gmail ကို နှစ်တွေအများကြီးကြာပြီးမှ ဒီဇိုင်းအကြီးမားဆုံး ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ပေးပြီး အခုဆိုရင် အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးက စမ်းသပ်သုံးစွဲနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Akhayar – Tech အဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့လည်း အခု Gmail အသစ်ကို စမ်းသပ်အသုံးပြုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ ဘာဖြစ်လို့ အခု ဒီ Gmail အသစ်က လူတိုင်းအခုပဲ စမ်းသပ်အသုံးပြုသင့်လဲဆိုတာကို မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံးအနေနဲ့ တကယ်လို့ ကိုယ်က Gmail အသစ်ကို မရရှိသေးဘူးဆိုရင် Web Browser မှာ Gmail ကို Sign In ဝင်လိုက်ပြီး Setting ရဲ့ အပေါ်ဆုံးက Try the New Gmail ကို နှိပ်ပြီး Gmail အသစ်ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
(1) Material Design User Interface
Gmail ရဲ့ အကောင်းဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကတော့ User Interface ပဲဖြစ်မှာပါ။ ယခင်က ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ Gmail Interface က အခုအချိန်မှာတော့ စမတ်ဖုန်းမှာ အသုံးပြုနေရသလိုပဲ လှပတဲ့ Material Design ဖြစ်သွားပါပြီ။ စစခြင်း ဝင်တဲ့ Loading Animation က ယခင်တုန်းက Gmail အသစ်ဝင်နေမလားဆိုပြီး F5 နှိပ်ပြီး Refresh လုပ်၊ ဘားတန်းလေး ပြည့်သွားတာကို စောင့်နေရတာထက် သိသိသာသာကို ပိုမိုမြန်ဆန်လာပြီး လှပလာပါတယ်။
(2) Split Pane ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီ
Gmail Split Pane
ယခင်က ကျွန်တော်တို့က Microsoft ရဲ့ Windows App တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mail App ကိုပဲ ယခင်တုန်းက အသုံးပြုဖြစ်နေတာပါ။ အဲ့ဒါကလည်း Mail App မှာ Gmail လိုမျိုးမဟုတ်ပဲ Split Pane Feature ဖြစ်တဲ့ တဖက်မှာ ဝင်လာတဲ့ Mail တစ်ခုကို ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ တခြားတဖက်ကလည်း တခြားဘယ် Mail တွေဝင်လာနေသေးတယ်ဆိုတာကို စစ်ဆေးနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ Gmail အသစ်မှာ Setting Icon ဘေးက Split Pane Toggle ကို နှိပ်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲနိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
(3) Attachment တွေကို Mail ထဲ ဝင်စရာမလိုပဲ ဖွင့်ကြည့်နိုင်ပြီ
ဒါကတော့ Google ရဲ့ Feature အသစ်ဆိုတာထက် Google Inbox မှာ ပါဝင်တဲ့ Feature က Gmail ကို ရောက်ရှိလာတာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Gmail အသစ်ရဲ့ Default Home Scree မှာတင် Mail တွေထဲက Attachment File တွေကို နာမည်ရော၊ File ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Mail ထဲ ဝင်စရာမလိုပဲ ဖွင့်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု Features ကို Split Pane အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာ အသုံးပြုလို့မရတဲ့အပြင် Setting – Display Density မှာလည်း Default ထားထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(4) Mail တွေကို Snooze ပြုလုပ်ထားနိုင်ခြင်း
ဒါကလည်း Google Inbox ရဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Mail မှာ Reply တွေအများအပြား ဝင်ရောက်လာတဲ့ Notifications တွေကို မမြင်ချင်ဘူးဆိုရင် Mail ရဲ့ ညာဘက်အစွန်ကို Mouse Arrow ကို အပေါ်ကနေ ရွေ့လိုက်ရုံနဲ့ Snooze ဆိုတဲ့ Feature ပါလာတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်ထားချင်တဲ့အချိန်အထိ Snooze ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
(5) အသုံးအဝင်ဆုံးသော Plug-in တွေပါဝင်လာခြင်း
Google Gmail အသစ်ကို အသုံးပြုနေပြီဆိုရင် Screen ရဲ့ ညာဘက်ထောင့်မှာ Icon ၃ ခု အသစ်ရောက်နေတာကို သတိထားမိမှာပါ။ အခုလောလောဆယ်မှာ Google ကနေ Gmail အသစ်ကို Google Calendar ၊ Google Keep နဲ့ Google Tasks ဆိုတဲ့ Plug in ၃ ခုကို ထည့်သွင်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Mail ထဲက သေချာသွားတဲ့ Appointment တွေကို Calendar Event ထဲကို Drag & Drop ပြုလုပ်ပြီး Event သတ်မှတ်နိုင်တဲ့အပြင် Notes တွေကိုလည်း Google Keep ထဲမှာ မှတ်သားထားနိုင်ဦးမှာပါ။ Google Tasks ကတော့ တလောကမှ Mobile App တစ်ခုထည့်သွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးသော Tasks Application တစ်ခုလို့ တောင်ပြောလို့ရနေပါပြီ။
(6) AI ပိုင်းဆိုင်ရာ ပါဝင်လာမှုတွေ
Gmail AI Feature
Google ရဲ့ Gmail အသစ်ဟာ လက်ရှိ Web Browser Version Mail Services တွေထဲမှာ အရင်ဆုံး AI နဲ့ Machine Learning စနစ်ကို အသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ဝင်ရောက်လာတဲ့ Mail တွေအတွက်လည်း ဖြစ်နိုင်တဲ့ Reply တွေကို Smart Replies အနေနဲ့ Suggestion ပေးသွားမှာဖြစ်သလို အချိန်ကြာကြာမဖတ်ဖြစ်တဲ့ Mail တွေကိုလည်း ဝင်နေတာဘယ်နှရက်ရှိပြီ၊ Reply ပြန်မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ Remind လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Google က နောက်ထပ် Feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Passcode ခံပြီး Mail ပို့နိုင်တဲ့ Confidential Mode ကိုပါ ထည့်သွင်းပေးမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် လောလောဆယ်မှာတော့ Personal Mail အသုံးပြုသူတွေက အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်သေးပဲ G Suite User တွေပဲ အသုံးပြုနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Google ရဲ့ Gmail အသစ်ကို ရက်ပိုင်းခန့် အသုံးပြုကြည့်ပြီးတော့ ကြိုက်နှစ်သက်မိတဲ့ Features တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Google ရဲ့ Gmail အပေါ် နှစ်တွေအကြာကြီးနေပြီးမှ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေက Gmail ကို အသုံးပြုပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့သူတွေကို ပိုပြီး မြန်ဆန်စွာနဲ့ ပို Productive ဖြစ်လာစေတယ်ဆိုတာက ငြင်းလို့မရပါဘူး။ Akhayar ပရိသတ်ကြီးထဲမှာလည်း Gmail အသစ်ကို အသုံးမပြုရသေးတဲ့သူရှိရင် အခုပဲ စမ်းသပ်ကြည့်ပါဦး။
Google ကနေ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျသတ်တပတျက Web Browser Version မှာ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ Gmail ကို နှဈတှအေမြားကွီးကွာပွီးမှ ဒီဇိုငျးအကွီးမားဆုံး ပွောငျးလဲမှုတဈခုကို ပွုလုပျပေးပွီး အခုဆိုရငျ အသုံးပွုနတေဲ့သူတှအေကုနျလုံးက စမျးသပျသုံးစှဲနိုငျနပွေီဖွဈပါတယျ။ Akhayar – Tech အဖှဲ့သားတှအေနနေဲ့လညျး အခု Gmail အသဈကို စမျးသပျအသုံးပွုဖွဈခဲ့ပွီးတော့ ဘာဖွဈလို့ အခု ဒီ Gmail အသဈက လူတိုငျးအခုပဲ စမျးသပျအသုံးပွုသငျ့လဲဆိုတာကို မြှဝပေေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အရငျဆုံးအနနေဲ့ တကယျလို့ ကိုယျက Gmail အသဈကို မရရှိသေးဘူးဆိုရငျ Web Browser မှာ Gmail ကို Sign In ဝငျလိုကျပွီး Setting ရဲ့ အပျေါဆုံးက Try the New Gmail ကို နှိပျပွီး Gmail အသဈကို ရယူနိုငျပါတယျ။
Gmail ရဲ့ အကောငျးဆုံးပွောငျးလဲမှုတဈခုကတော့ User Interface ပဲဖွဈမှာပါ။ ယခငျက ရိုးရှငျးလှနျးတဲ့ Gmail Interface က အခုအခြိနျမှာတော့ စမတျဖုနျးမှာ အသုံးပွုနရေသလိုပဲ လှပတဲ့ Material Design ဖွဈသှားပါပွီ။ စစခွငျး ဝငျတဲ့ Loading Animation က ယခငျတုနျးက Gmail အသဈဝငျနမေလားဆိုပွီး F5 နှိပျပွီး Refresh လုပျ၊ ဘားတနျးလေး ပွညျ့သှားတာကို စောငျ့နရေတာထကျ သိသိသာသာကို ပိုမိုမွနျဆနျလာပွီး လှပလာပါတယျ။
(2) Split Pane ကိုအသုံးပွုနိုငျပွီ
ယခငျက ကြှနျတျောတို့က Microsoft ရဲ့ Windows App တဈခုဖွဈတဲ့ Mail App ကိုပဲ ယခငျတုနျးက အသုံးပွုဖွဈနတောပါ။ အဲ့ဒါကလညျး Mail App မှာ Gmail လိုမြိုးမဟုတျပဲ Split Pane Feature ဖွဈတဲ့ တဖကျမှာ ဝငျလာတဲ့ Mail တဈခုကို ဖတျနတေဲ့အခြိနျမှာ တခွားတဖကျကလညျး တခွားဘယျ Mail တှဝေငျလာနသေေးတယျဆိုတာကို စဈဆေးနိုငျတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာတော့ Gmail အသဈမှာ Setting Icon ဘေးက Split Pane Toggle ကို နှိပျပွီးတော့ ပွောငျးလဲနိုငျနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။
(3) Attachment တှကေို Mail ထဲ ဝငျစရာမလိုပဲ ဖှငျ့ကွညျ့နိုငျပွီ
ဒါကတော့ Google ရဲ့ Feature အသဈဆိုတာထကျ Google Inbox မှာ ပါဝငျတဲ့ Feature က Gmail ကို ရောကျရှိလာတာလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ Gmail အသဈရဲ့ Default Home Scree မှာတငျ Mail တှထေဲက Attachment File တှကေို နာမညျရော၊ File ကို နှိပျလိုကျတာနဲ့ Mail ထဲ ဝငျစရာမလိုပဲ ဖှငျ့နိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခု Features ကို Split Pane အသုံးပွုနတေဲ့အခြိနျမှာ အသုံးပွုလို့မရတဲ့အပွငျ Setting – Display Density မှာလညျး Default ထားထားဖို့ လိုအပျမှာဖွဈပါတယျ။
(4) Mail တှကေို Snooze ပွုလုပျထားနိုငျခွငျး
ဒါကလညျး Google Inbox ရဲ့ Feature တဈခုဖွဈပွီးတော့ Mail မှာ Reply တှအေမြားအပွား ဝငျရောကျလာတဲ့ Notifications တှကေို မမွငျခငျြဘူးဆိုရငျ Mail ရဲ့ ညာဘကျအစှနျကို Mouse Arrow ကို အပျေါကနေ ရှလေို့ကျရုံနဲ့ Snooze ဆိုတဲ့ Feature ပါလာတာကို တှရေ့မှာဖွဈပွီးတော့ ကိုယျထားခငျြတဲ့အခြိနျအထိ Snooze ပွုလုပျထားနိုငျပါတယျ။
(5) အသုံးအဝငျဆုံးသော Plug-in တှပေါဝငျလာခွငျး
Google Gmail အသဈကို အသုံးပွုနပွေီဆိုရငျ Screen ရဲ့ ညာဘကျထောငျ့မှာ Icon ၃ ခု အသဈရောကျနတောကို သတိထားမိမှာပါ။ အခုလောလောဆယျမှာ Google ကနေ Gmail အသဈကို Google Calendar ၊ Google Keep နဲ့ Google Tasks ဆိုတဲ့ Plug in ၃ ခုကို ထညျ့သှငျးပေးထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Mail ထဲက သခြောသှားတဲ့ Appointment တှကေို Calendar Event ထဲကို Drag & Drop ပွုလုပျပွီး Event သတျမှတျနိုငျတဲ့အပွငျ Notes တှကေိုလညျး Google Keep ထဲမှာ မှတျသားထားနိုငျဦးမှာပါ။ Google Tasks ကတော့ တလောကမှ Mobile App တဈခုထညျ့သှငျးပေးခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ လကျရှိအခြိနျမှာ အရိုးရှငျးဆုံးနဲ့ အကောငျးဆုံးသော Tasks Application တဈခုလို့ တောငျပွောလို့ရနပေါပွီ။
(6) AI ပိုငျးဆိုငျရာ ပါဝငျလာမှုတှေ
Google ရဲ့ Gmail အသဈဟာ လကျရှိ Web Browser Version Mail Services တှထေဲမှာ အရငျဆုံး AI နဲ့ Machine Learning စနဈကို အသုံးပွုလာတာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ ဝငျရောကျလာတဲ့ Mail တှအေတှကျလညျး ဖွဈနိုငျတဲ့ Reply တှကေို Smart Replies အနနေဲ့ Suggestion ပေးသှားမှာဖွဈသလို အခြိနျကွာကွာမဖတျဖွဈတဲ့ Mail တှကေိုလညျး ဝငျနတောဘယျနှရကျရှိပွီ၊ Reply ပွနျမလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှနေဲ့ Remind လုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
Google က နောကျထပျ Feature တဈခုဖွဈတဲ့ Passcode ခံပွီး Mail ပို့နိုငျတဲ့ Confidential Mode ကိုပါ ထညျ့သှငျးပေးမယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပမေယျ့ လောလောဆယျမှာတော့ Personal Mail အသုံးပွုသူတှကေ အသုံးပွုလို့ရမှာမဟုတျသေးပဲ G Suite User တှပေဲ အသုံးပွုနိုငျဦးမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ Google ရဲ့ Gmail အသဈကို ရကျပိုငျးခနျ့ အသုံးပွုကွညျ့ပွီးတော့ ကွိုကျနှဈသကျမိတဲ့ Features တှပေဲဖွဈပါတယျ။ Google ရဲ့ Gmail အပျေါ နှဈတှအေကွာကွီးနပွေီးမှ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ပွောငျးလဲမှုတှကေ Gmail ကို အသုံးပွုပွီး အလုပျလုပျကိုငျနရေတဲ့သူတှကေို ပိုပွီး မွနျဆနျစှာနဲ့ ပို Productive ဖွဈလာစတေယျဆိုတာက ငွငျးလို့မရပါဘူး။ Akhayar ပရိသတျကွီးထဲမှာလညျး Gmail အသဈကို အသုံးမပွုရသေးတဲ့သူရှိရငျ အခုပဲ စမျးသပျကွညျ့ပါဦး။